Minneapolis oo laga taageeray musharax Ubah Aden -
Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad balaaran oo lagu taageeray musharax Ubax Aden oo u tartamaysa Gudoonka Golaha Waxbarashada ee degmadda Takwila, magaalada Seatle, Washington.
Munaasabaddan oo si wanaagsan loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar kamid ah Odeyaasha dhaqanka, aqoonyahano iskugu jira haween iyo rag, ganacsato, abwaano, qaar kamid ah hogaamiyeyaasha laga soo doorto gobolka Minnesota iyo waliba waxgarad kale oo dhammaantood musharax Ubax Adan u muujiyey taageero balaaran.
Musharax Ubax Adan oo madasha ka hadashay ayaa u mahadcelisay dhamaan marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda musharaxnimadeeda lagu taageerayay. Ubax ayaa madasha ka jeediyay qudbad aad u qiimo badan oo ay uga hadashay sababta ku kaliftay in ay u tartanto Gudoonka Golaha Waxbarashada ee degmadda Takwila.
Ubax ayaa sheegtay in ay la imaan doonto matalaad dhab ah oo ay cod ugu noqonayso dhamaan carruurta wax ka barta dugsiyadda degmadda Takwila iyo waalidiinta. Ubax ayaa tiri, ” Sababta aan xilkan ugu tartamayo ma’aha in aan lacag raadinayo, kursigani ma aha meel ay lacagi iga soo galayso, waa masuuliyad iskaa wax u qabso ah”. Ubah oo hadlakeeda sii wadata ayaa sheegtay in ay in muddo ah qayb ka ahayd Gudigga Qoondaynta Maaliyadda iyo Gudigga la tallinta waalidka, balse ay ogaatay goobta go’aanka dhabta ah lagu qaaro ama isbeddelka saxda ah laga sameynkaro ay tahay Guddiga Gudoonka Golaha Waxbarashada ee ay u tartamayso.
Musharax Ubax Aden ayaa iyaddu waano wanaagsan oo wax ku ool ah u soo jeedisay dadweynihii munaasabadda xaadirka ku ahaa iyo waliba dhamaan waalidiinta Soomaaliyeed. Sidoo kale Ubax ayaa sheegtay in waxbarasho dhab ah ay muhiim u tahay cunug walba, bulshadda Soomaaliyeed ee iyagu ku dhaqan degmadda Takwila in ay dhacdo in lagu riixo arrimo la xiriira luuqadda, dhaqanka iyo waliba diinta, sidaa daraadeedna ay muhiim tahay in ay bulshadeenu hesho cid meesha go’aamada lagu gaarayo u joogta.
Haddaba munaasabaddan oo aan loo kala harin ayaa waxaa mid ah dadkii iyo mari sharaftii meesha ka hadlay, qudbaddo kala duwana ka jeediyey, Xildhibaan Ilhan Cumar, Gudoomiye Siyaad Cali, Musharax AK Hassan, Ubax Jaamac Biixi, Maxamed Wardheere, Musharax Abshir Cumar, Ayaan Ciise. Dhamaan dadkii munaasabada qudbadaha kala duwan ka jeediyey ayaa musharax Ubax ku amaanay karti, hogaan wanaag, aqoon iyo rabitaan dhab ah oo ay rabto in ay dadkeeda wax ugu qabato.
Waxaa kale oo munaasabaddan heeso iyo gabayo ka qaaday qaar kamid ah abwaanadda iyo fanaaniinta Soomaaliyeed ee iyagu ku dhaqan gobolka Minnesota oo ay kamid yihiin Cabdulkadir Aargoos, C/Nasir Cali “Dhega dheere” iyo Gaaciye.
Dhallinyaradda aadka ugu xeel dheer ciyaaraha hiddaha iyo dhaqka ee ka socday Masxafka Hiddaha iyo Dhaqanka Soomaaliyeed ee uu saldhigiisu yahay magaalada Minneapolis ayaa iyaguna ciyaaraha hiddaha dhaqanka meesha ku soo bandhigay.
Dhamaan marti sharaftii nasiibka iyagu u yeeshay in ay ka qaybqaataan munaasabad balaaran ee lagu taageerayey musharax Ubax Aden oo u tartamaysa Gudoonka Golaha Waxbarashada ee degmadda Takwila ayaa balanqaaday in ay hiil iyo hooba la garab istaagayaan Ubax. Gaar kamid ah dadweyniihii goobta joogay ayaa iyagu Ubax u sheegay in ay diyaar u yihiin in ay magaalada Seatle tagaan oo ay Ubax albaabada u gargaraacan wakhtiga doorashaddu ay bilaabato.
Related Items:Featured, Somali community, Somali Minneapolis, U.S Election
Minnesota Lawyer stands up to Trump Travel Ban to Keep Families Together